UCharles Darwin ubhiyozelwa njengendoda ehamba phambili kwiNtsholongwane ye-Evolution kunye noKhetho lweNdalo . Kodwa ezinye iinkolelo eziqhelekileyo malunga nososayensi zigqithiseleyo, kwaye ezininzi zazo ziphosakeleyo. Nazi ezinye zeengcamango ezingalunganga malunga noCharles Darwin, ezinye zezifundo onokuzifundela esikolweni.
UDarwin "Wafumanisa" Ukuziphendukela kwemvelo
Kwimvelaphi yephepha lephepha lezityalo - Iifoto ezithembekileyo zeThala leeNkcazo . Library of Congress
Njengazo zonke izazinzulu, uDarwin wakha uphando olwenziwe lulwazi olunzulu lwaza lwafika phambi kwakhe . Kwaye izafilosofi zasendulo zavela ngamabali kunye neengcamango eza kuthathwa njengesiseko sokuziphendukela kwemvelo. Ngoko kutheni uDarwin athola iitaliti ngokuza kwiNkolelo yokuVikela? Wayengowokuqala ukushicilela kungekhona nje ingcamango, kodwa ubungqina kunye nendlela (ukhetho lwendalo) malunga nendlela yokuziphendukela kwemvelo kwenzeka ngayo. Kufuneka kuqatshelwe ukuba incwadi yokuqala yaseDarwin malunga nokukhethwa kwendalo kunye nokuziphendukela kwemvelo yayinene iphepha elihlangeneyo kunye noAlfred Russel Wallace , kodwa emva kokuthetha nomdlali wezinto eziphilayo uCharles Lyell , uDarwin ngokukhawuleza wahamba emva kukaWallace ukuba abhale ngokucacileyo kwaye ashicilele umsebenzi wakhe odumeleyo Imvelaphi yeentlobo .
Inkolelo kaDarwin yaye yamkelwa ngokukhawuleza
UCharles Darwin. I-Getty / De Agostini / AC Cooper
Idatha kunye neencwadi zikaCharles Darwin zabelwana ngo-1858 kwi-Linnaean Society yeNdibano yonyaka yeLondon. Ngokwenene uCharles Lyell odibene nomsebenzi kaDarwin kunye nedatha epapashwe ngu-Alfred Russel Wallace kwaye wayifumana kwi-ajenda yeentlanganiso. Ingcamango yokuziphendukela kwemvelo ngokusebenzisa ukhetho lwendalo yambuliswa ngokufumana ukufudumala kwamanzi. UDarwin wayengafuni ukushicilela umsebenzi wakhe, ngoxa wayesele ehlanganisa iziqwenga ukwenza ingxabano ephosakeleyo. Ngomnyaka kamva, wapapasha kwi-Origin of Species . Incwadi, ezaliswe ubungqina kunye nokugxilwa kwendlela iintlobo zitshintsho kwixesha, zamkelwa ngokubanzi ngaphezu kokushicilelwa kwangaphambili kweengcamango. Nangona kunjalo, wahlala ehlangene kwaye wayeza kuhlela le ncwadi aze afaka ubungqina obuninzi kunye namaxesha athile de wafa ngo-1882.
UCharles Darwin wayengakholelwa kuThixo
Evolution kunye neNkolo. Nge-latvian (ukuguquguquka) [CC-BY-2.0], nge-Wikimedia Commons
Ngokuchasene nenkolelo eninzi, uCharles Darwin wayengakholelwa kuThixo. Enyanisweni, ngenye indlela, wayefunda ukuba abe ngumfundisi. Umkakhe, uEnglish Wedgwood Darwin, wayengumKristu ozinikele kwaye wayebandakanyeka kakhulu neCawa laseNgilani. Iziphumo zikaDarwin zatshintshe ukholo lwakhe kwiminyaka, nangona kunjalo. Ngeencwadi ezibhalwa nguDarwin, wayeza kuzichaza ngokuthi "u-agnostic" kufuphi nokuphela kobomi bakhe. Uninzi lwenguquko lwakhe elukholweni lwalususelwe kwixesha elide, elibuhlungu kunye nokufa kwentombi yakhe, kungekhona umsebenzi wakhe ngokuziphendukela kwemvelo. Wayekholelwa ukuba unqulo okanye ukholo luyingxenye ebalulekileyo yobomi babantu kwaye akazange ahlekise okanye ahlasele nabani na owayefuna ukukholelwa. Ngokuqhelekileyo wayecatshulwa esithi kwakukho uhlobo lwamandla aphakamileyo, kodwa akazange alandele ubuKristu kwaye wamkhathaza ukuba wayengakholelwa kwiincwadi zakhe ezizithandayo kwiBhayibhile-IiVangeli. Icawa ye-Unitarian ye-liberary yamkela ngokuqinisekileyo iDarwin kunye neengcamango zakhe ngokudumisa kwaye yaqala ukubandakanya iingcamango zokuziphendukela kwemvelo kwinkqubo yabo yenkolelo.
UDarwin uchaza uMvelaphi woBomi
I-panorama yamanzi e-Hydrothermal, i-2600m inzulu eMazatlan. Getty / Kenneth L. Smith, Jr.
Le ngcamango engaqondakaliyo ngoCharles Darwin ibonakala ivela kwisihloko sencwadi yakhe edume kakhulu kwi-Origin of Species . Nangona esi sihloko sibonakala sibonisa inkcazo yokuba ubomi buqalisiwe njani, akunjalo. UDarwin akanikeli ngcamango malunga nendlela ubomi beqala ngayo emhlabeni, njengoko kwakungekho ngaphaya kobuninzi beenkcukacha zakhe. Kunoko, le ncwadi ibeka ingcamango yendlela iintlobo zeentshukumo ezitshintsha ngayo ixesha ngokukhetha okwenyama. Nangona ixubusha ukuba bonke ubomi buhlobene nantoni na okhokho, uDarwin akazami ukucacisa ukuba lo okhokho oqhelekileyo waba njani. Ingqungquthela kaDarwin ye-Evolution yayisekelwe kwinqanaba lenzululwazi zanamhlanje eziza kuthathelwa ingqungquthela yokuguquguquka kwezinto eziphilayo kunye nokuhlukahluka kwezinto eziphilayo kunokugqithiswa kwezinto ezincinane kunye nezakhiwo zobomi.
UDarwin Wathi Abantu Bavulwe kwiimonki
Indoda kunye neenkwenkwezi. Getty / David McGlynn
Kwakumzabalazo kuDarwin ukuba anqume ukuba okanye akayi kubandakanyeka iingcamango zakhe ngokuziphendukela komntu kwiincwadi zakhe. Wayeyazi ukuba babeza kuba neengxabano kwaye ngoxa wayenabo ubungqina obunzulu kunye nenqwaba yeengqondo malunga nesi sifundo, waqala ukuyeka ukuchaza indlela abantu abaye bajika ngayo. Ekugqibeleni, wabhala Inzala Yomntu waza wachaza indlela yakhe yokuziphatha kwabantu. Nangona kunjalo, akazange athethe ukuba abantu bavela kwiinkwenkwe kwaye le nkcazo ibonisa ukungaqondi kakuhle kwimbono yokuziphendukela kwemvelo. Abantu baxhamene nezilwanyana, njengama-apes, emthini wobomi. Abantu abayiyo inzala ngqo yeebhatshe okanye iinqanawa, nangona kunjalo, kwaye bahlala kwisebe elithile lomthi. Kuya kuba nokuchanekileyo ngakumbi ukuthetha ukuba abantu kunye nama-apes bangabazala ukuba babeke kwiimeko eziqhelekileyo.
I-Dinosaurs kunye Nezilwanyana Zokuqala zase-Oklahoma
I-Dinosaurs ikhethwa njani?
Iingoma ezi-100 eziphambili kwii-1990s
Ngaba i-Ivy Tech Community College e-Indiana ikulungele?
Isingeniso kwisiGaba soLwazi lweAikeike (AIC)
Kutheni iGesi eziMangalisayo zibizwa ngokuba zihloniphekile?
Kutheni Akunamanzi kwiThebhile yePeriodic?
Humusha isiNgesi ukuya kwisiHindi, isiBangali, isiMarathi, isiTamil, isiTelugu okanye isiNanada
Iincwadi eziPhambili zeNgqiqo yeNkcubeko: USA
I-ICE okanye i-Immigration kunye ne-Customs Enforcement
IYunivesithi yaseMansfield yasePennsylvania
I-Heroes enkulu kakhulu yeGreek Mythology
I-SAT yokuFunda okuCwangcisiweyo